Yainzwa Wool Mhuka Vagadziri - China Yainzwa Mvere dzemhuka Vatengesi, Fekitori
Isu tese Tinoda Takanzwa Makonzo Ngirozi
Kutengesa kwakanyanya akanzwa chishongo chedinosaur
Yakachena chena reindeer shinda yekushongedza
Yakakurumbira Felt Kitten Ornament 4ASST
Yakakurumbira sloth chishongo
Akanyanya kutengesa murume wechando muJapan
Yakanakisa yekutengesa imbwa chishongo 4asst
Wepamusoro Kutengesa Wool Santa Tafura Yekushongedza
Bhasikoro rakagadzirwa nemaoko neXmas Tree Yakarembera
Handcraft akanzwa katsi kuchikoro
Zvikonzero zvekurudziro Unoziva here kuti nei katsi dzako dzakanakisa uye dzakangwara? Nekuti vese vakadzidza! Izvo iwe zvaunoona mu "Handiwork" nhasi zvakafanana chikoro kate akateedzana sekako katsi. Ruoko rwakagadzirwa nemaoko runogadzira katsi yega yega iwe yakasarudzika! Huya, tsvaga mudiwa wekati yako!
Akanzwa mvere dzemabhasikoro emicheka
Zvikonzero zvekurudziro Unorangarira iyo yekatuni bhaisikopo "Zootopia" iyo yakatsvaira nyika muna 2016? Wati wambofungidzira here kuti mhuka dzinotasva mabhasikoro sesu? Nhasi tinokuunzira edu akanzwa mhuka akatasva akateedzana. Vakanaka VaElk, The Cool Mr. chipembere Mr. twiza mukupfava, Miss alpaca uye akangwara tsoko vese vari pabhasikoro rimwe chete rekare kuti vakukwazise. Ichi chiitiko chinoshamisa? Sarudza zvigadzirwa zvinotengeswa zvemwaka!
Akanzwa hove beaver chishongo
Zvikonzero zvekurudziro Beaver imhando hombe yemakonzo, ari emhuka dzemumvura, vanogara kuchamhembe kwenyika munzvimbo inotonhora, vanogona kugara pasi pechando. Kune marudzi maviri chete asara pasi rose: imwe ndeyeAmerican beaver, iyo inogoverwa kuchamhembe kweUnited States, Canada neAlaska, uye imwe ndiyo beaver inogara kuEurasia, kuchamhembe kweAsia neEurope. Nhasi tinokurudzira ma beavers matatu kubva kuCanada. Ivo vese vanofarira kudya hove uye vane hunyanzvi hwekuredza. Iyo ...
Akanaka akanzwa chishongo chemakwai
Zvikonzero zvekurudziro Mhuri yeakagadzirwa nemaoko akanzwa makwai ane hunyengeri furiri ndiyo inonyanya kufarirwa boka reedu ese makushe akanzwa makwai akateedzana parizvino. Ivo baba vemakwai, amai vemakwai, mukwai wemukoma uye hanzvadzi yegwayana. Mhuri Keepsake ibhero remhangura. Iyo Green Leaf Necklace inowedzera kubata kweKisimusi. Mhuri inoyevedza yemakwai yakakodzera kutenga imba sechipo pane chero zororo
Assorted akanaka akagadzirwa nemaoko akanzwa imbwa vafambisi vechikepe
Zvishongedzo, Kumba Kushongedza, Wall Art, Krisimasi Chishongo, Kushongedza, Wall Kushongedza,